CHP ၏Çakırözer YHT Abonman သည်လုပ်အားခတိုးမြှင့်ခြင်းကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည် RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီCHP မှÇakırözer YHT Abonman သည် Wage Hike အားပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်
CHP မှÇakırözer YHT Abonman သည် Wage Hike အားပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်
23 / 01 / 2020 06 တူရကီ, 26 Eskisehir, 42 Konya, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
chpli cakirozer yht အသုံးပြုသူစျေးနှုန်းမြင့်တက်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်
TCDD သည်မြန်နှုန်းမြင့်ရထား (YHT) subscription လက်မှတ်များကိုမြှင့်သည်ဟုအခိုင်အမာဆိုခဲ့သည်။ CHP မှ Utku Çakırözer၏စွပ်စွဲချက်များအရ၊ Ankara-Eskişehir၊ Ankara-Konya အနေဖြင့် YHT ၏ပေးသွင်းခမှာ Ankara တွင်လေ့လာနေသည့်ကျောင်းသားများနှင့်အရာရှိများသည် TL ၄၈၀ မှ ၆၈၇,၀၀၀ သို့တက်ခဲ့သည်။
Utku Çakırözer, CHP Eskişehirလက်ထောက်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်
Eskişehir CHP မှလက်ထောက်ဖြစ်သူ Utku Çakırözerကဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ကြေးပေးသွင်းလက်မှတ်များတိုးမြှင့်ခြင်းကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
“ Çakırözer,“ သူကအမြန်ရထားရထားလက်မှတ်ကိုတက်လိုက်တာ။ Eskişehir-Ankara လိုင်းတွင် ၀ န်ထမ်းများကပိုနှစ်သက်သောရက် ၃၀ ကြေးပေးသွင်းမှုသည် lira 30 မှ ​​lira 624 သို့တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ အရာရှိ၏လစာ၏ ၁၇၀ ရာနှုန်း၊ ရထားလက်မှတ်အတွက် ၅.၅ ရာခိုင်နှုန်း! Insaf …”
Eskişehir-Ankara လိုင်းမှ ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်ရက် ၃၀ ပေးသွင်းရမည့်ရက် ၃၀ ကြေးမှာ lira 30 မှ ​​lira 624 သို့တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
အစိုးရ ၀ န်ထမ်းလစာ၏ ၅.၅ ရာခိုင်နှုန်း၊
ရထားလက်မှတ်ကို ၁၇၀ ရာခိုင်နှုန်းတိုး!
- Utku Çakırözer (@utkucakirozer) ဇန်နဝါရီလ 22, 2020
CHP မှ Cakirozer က TCDD မြှင့်ခြင်းမရှိဟုပြောသော်လည်း၊ 'ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်လုံးဝဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး'! Eskişehir-Ankara 624 lira လစဉ်ကြေးမှာ ၁၆၈၇ လီရာဖြစ်သည်။ Ankara-Konya Ankara-Eskişehir၏ကြေးပေးသွင်းမှုသည် ၁၇၀%၊ Ankara-Polatlı ၂၀၀% တိုးတက်ခဲ့သည်။ လူငယ်များ၏စာရင်းပေးသွင်းမှုသည် ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်ခဲ့သည်။ ”
TCDD ကအဘယ်သူမျှမမြှင့်ကပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့် 'ဘာမျှမဖြစ်ပျက်ရင်တောင်သေချာပေါက်တစ်ခုခုဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်' '!
Eskişehir-Ankara 624 lira လစဉ်ကြေးမှာ ၁၆၈၇ လီရာဖြစ်သည်။
Ankara-Konya Ankara-Eskişehir၏ကြေးပေးသွင်းမှုသည် ၁၇၀%၊ Ankara-Polatlı ၂၀၀% တိုးတက်ခဲ့သည်။
လူငယ်များ၏ကြေးပေးသွင်းမှုသည် ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်ခဲ့သည်။
- Utku Çakırözer (@utkucakirozer) ဇန်နဝါရီလ 23, 2020
Süzer Estrada အတွက်ကျောင်းသားကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကိုပြသပါငါ့တိုးမြှင်တုံ့ပြန်မှုခဲ့ပြီးနောက်
Bursalılarတွစ်တာ Bursara အပေါ်တိုးမြှင့်ဖို့တုံ့ပြန်
MAG Metrobus တူရကီလုပ်ဆောင်ချက်များတွစ်တာပေါ်တွင်တုံ့ပြန်မှုကဘာဖြစ်တယ်လို့ပြရန်
တားဆီးရန် Kocaeli အတွက်ရပ်တန့်ဖို့အစာရှောင်ရထားကြီးစွာသောတုန့်ပြန်ပြသ
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး Giresun ကုန်သည်ကြီးများအသင်းအတွက်မီးရထားလမ်းကြောင်းမှတုံ့ပြန်
ပြည်ထောင်စုပြရန်ယောဘကိုဖြန့်ချိဆုံးဖြတ်ချက်မှ TCDD တုံ့ပြန်မှုခဲ့သည်
ယူနိုက်တက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလုပ်သမားများအလုပ်သမားသမဂ္ဂ Force အခမ်းအနားတုံ့ပြန်
ကျန်ရှိနေသေးသောသောင်တင်ခရီးသည်အမြန်ရထားအခြေအနေတုံ့ပြန်မှုပြရန် (ဗီဒီယို) ရက်နေ့တွင်ခဲ့ကြသည်
Sirkeci ဘူတာ BTS လွှဲပြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်မှတုံ့ပြန်
TCDD သည် YHT လက်မှတ် ၃၀၀ ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြှင့်ခြင်းလက်မှတ်ကိုငြင်းပယ်သည်
မြို့တော်ဝန်Özcan: ငါ Bolu အမြန်ရထားရထားစီမံကိန်းအတွက်လိုအပ်ပါကငါ Ankara သို့သွားမည်